राजश्वका नाममा पर्यटक नलुटौं | .:: Welcome || Paryatannews
Home » विचार » राजश्वका नाममा पर्यटक नलुटौं
राजश्वका नाममा पर्यटक नलुटौं
नेपालको पर्यटन भर्खरै जुर्मुराउँन सुरु गरेको छ । पर्यटनले भूकम्प, नाकाबन्दी, तराई आन्दोलन, सगरमाथा तथा मनास्लुको हिँउ पहिरो बिर्सिएर भर्खरै जरा गाड्न थालेको छ । पर्यटन क्षेत्र यस्तो संवेदनशील क्षेत्र हो जहाँ शान्ति र अमनचयन हुन्छ त्यही पर्यटक जान मन पराउँछन् । सोही स्थानमा चहलपहल बढी हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि पर्यटकलाई आर्थिक विकासको पहिलो आधार मानिन्छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले पर्यटनलाई आर्थिक विकासको मूल आधार मानिसकेका छन् । खाडी मुलुक जो विकास निर्माण र तेलको राजनीतिकै वरिपरि घुमिरहेको छ । ती देशले पनि पर्यटनलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मान्न थालेको छन् ।
तेलको खानी मानिएका संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले पनि विगत दुई तीन वर्षदेखि पर्यटनमा भविष्य मोड्न थालेको छ । विकसित राष्ट्रले एकपछि अर्कोले पर्यटनलाई नै आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको छ । विश्वका विकसित मानिएका र सम्पन्नशाली राष्ट्रको सूचिमा दर्ज भएका जी ८ हुन वा जी २० का मुलुक सबैले पर्यटनलाई नै आर्थिक विकासको केन्द्रविन्दू मानेका छन् ।
नेपाल पनि पर्यटनमा संभावना भएको र पर्यटक भित्र्याउन सक्ने अब्बल राष्ट्रको रूपमा बिस्तारै दर्ज हुँदै छ । नेपालले पर्यटन विकास मात्रै हैन, पर्यटनकै माध्यमबाट आर्थिक क्रान्ति नै गर्न सक्छ । पर्यटनमा राज्यको मात्रै हैन नीजि क्षेत्रको योगदान बढी छ । त्यसैले सानोतिनो निर्णय र कुनै घट्नाको असरले पनि प्रत्यक्ष रूपमा निजी क्षेत्रलाई असर पर्ने गरेको छ । नेपालमा सरकारको पर्यटनमा लगानी नै नभएकोले कारण पनि पर्यटनप्रति सरकारी अपेच्छा अनुसारको जिम्मेवार छैन । पर्यटनप्रतिको जिम्मेवारी कमजोर भएकै कारण खुम्बु गाउँपालिकाले एक महिना अगाडि गरेको निर्णय एक महिनाको समय दिएर कार्यान्वयन गर्ने गरी सार्वजनिक रूपमै सूचना दिँदा पनि सरकार बेखबर बनेको छ । पर्यटन स्थानीय तहमा घुम्न थालेको छ । स्थानीय तहले गर्ने हरेक निर्णयमा सरकार मौन बस्नु भनेको पर्यटनलाई लोकल व्यापारमा धकेल्नु हो । पर्यटन कहिल्यै पनि लोकल व्यापार हुन सक्दैन । राष्ट्रिय रूपमा आएका पर्यटक लोकल स्थानमा जान सक्छन् । तर, लोकल रुपमै रमाएर बसिरहन भने सक्दैनन् । राजश्वका नाममा पर्यटकमाथि लुट भएको छ ।
पर्यटकबाट स्थानीय तहगत रूपमै शुल्क लिने विषयले त्यो स्थानमा पर्यटन जानै पर्छ भन्ने बाध्यता नुहन सक्छ । व्यवसायीले पनि जहाज लाभ बढी हुन्छ त्यही ताक्ने भएकोले जहाज पर्यटकले सेवा शुल्क तिर्नु पर्दैैन त्यो स्थानमा जान पर्यटकलाई सिफारिश गर्न सक्छन् । यसर्थ पर्यटन भनेको हामी सबैको साझा सम्पती हो । एक स्थानमा आएका पर्यटक अर्को स्थानमा पुग्ने उनिहरुको दैनिकी र दीनचर्या नै हुन सक्छ । तर, एकै दिन ३ ठाउँमा लिइने शुल्कले न पर्यटक शुल्क तिर्न लालयित हुन्छ, न उसले सन्तुष्ट भएर पर्यटकीय वातावरणमै रमाउँछ ? पर्यटन भनेको हामी नेपालीको राष्ट्रको इज्जत हो । राष्ट्रिय रूपमा आउने पर्यटकले मात्रै दिर्घकालिन लाभ गर्न सक्छ । हामीले हरेक गाउँपालिकमा आउने पर्यटकबाट शुल्क लिने भन्दापनि यो स्थानमा आउनेबाट लाभ धेरै दिन सक्ने हुनुपर्छ । पर्यटकलाई ग्रामिण क्षेत्रसँग घुलमिल गराउँन सक्नुपर्छ । स्थानीय कला र संस्कृति बेच्न सक्नुपर्छ । धेरैभन्दा धेरै खर्च गर्ने र पर्यटकीय वातावरण बनाउने गर्नुपर्छ । भएका पर्यटक पनि भाग्ने वातावरण हैन । त्यसलै पर्यटकमाथि स्थानीय स्तरले राजश्वका नाममा लुट नगरांै । जय पर्यटन ।
राजश्वका नाममा पर्यटक नलुटौं Reviewed by Shiva Shrestha on Oct 08 . नेपालको पर्यटन भर्खरै जुर्मुराउँन सुरु गरेको छ । पर्यटनले भूकम्प, नाकाबन्दी, तराई आन्दोलन, सगरमाथा तथा मनास्लुको हिँउ पहिरो बिर्सिएर भर्खरै जरा गाड्न थालेको छ । नेपालको पर्यटन भर्खरै जुर्मुराउँन सुरु गरेको छ । पर्यटनले भूकम्प, नाकाबन्दी, तराई आन्दोलन, सगरमाथा तथा मनास्लुको हिँउ पहिरो बिर्सिएर भर्खरै जरा गाड्न थालेको छ । Rating: 0